နိုင်ငံသား ပါတ်စပို့ ဖျောက် နိုင်ငံခြားရောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နိုင်ငံသား ပါတ်စပို့ ဖျောက် နိုင်ငံခြားရောက်
နိုင်ငံသား ပါတ်စပို့ ဖျောက် နိုင်ငံခြားရောက်
Posted by လေပြေ on Oct 21, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
ဘယ်သူမဆို ကို့ အိမ်ကို ကို ပြန်ခြင်သူကြီးပါပဲ ။ ဒီလိုပါ မြန်မာနိုင်ငံသားပါတ်စပို့ ကိုင်ထားသူတွေဟာ ကိုင်ဆောင်နေသူတွေကြောင့် မဟုတ်ပဲ အဲ့ဒီထုတ်ပေးနေတဲ့ သူတွေကြောင့် အဲ့းဒီစာအုပ်တွေကို ရေထဲမျော သုံးမရတဲ့စာအုပ်ပုံတွေခြားထဲ မှာပဲ ထားလိုက်တယ် ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာလေ ဘယ်နိုင်ငံကမှ အသုံမပြုရသေးတဲ့ စနစ်လေ တခါသုံးလေ ပြန်လည်းဖို့ အင်မတန် တန်ဖိုးကြီးပါတယ် ။ ကျနော်က ယူရို မှာနေတယ် ပါတ်စပို့ ကိုင်ပြီး အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ လာကြတယ် အချိန်ကြလာတော့ စာအုပ် သက်တမ်တွေကုန်လာတော့ မြန်မာသံရုံးတွေကို ပြေရတာပေါ့ ဖုန်းဆက်လျင် မြန်မာစကား စပြောလို့ မရ ဘိုလို စသုံးရတယ် want to see မြန်မာ ပေါ့ စာအုပ်သက်တမ်း တိုးချင်တယ် ဘယ်လိုတိုးရမလဲ ဘာလုပ်ရမလဲ (ကြားဖြတ် .. ဒီနေ့ ခေတ်ဟာ ဆက်သွယ်ရေး အင်မတန် အားကောင်း ပါတယ် အင်တာနက် အီးမေးလ် ဖုန်း ဖက်စ် အများကြီးပါ ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေက လူသားအစ ကတဲကသုံးနေတဲ့ မြန်မာသံရုံးကို သွားဖို့သွားဘူးတဲ့ လူ လုပ်ဖူးတဲ့လူ တွေကို မေးပြီး ဘယ်လို အင်ထရိုတွေဝင်ပြီး လမ်းကြောင်းက ဘယ်လို့ စသာတွေရှာပြီး သွားနေရတဲ့ ထွီး … အောက်တန်းကျတဲ့ မြန်မာသံရုံး ) မြန်မာသံရုံးဟာ မြန်မာတွေရဲ့ ရုံး စစ်စစ် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မြန်မာပါတ်စပို့ကိုင်ထားသူတွေအတွက် လုံးဝ ကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါတယ် ။
အထက်က အကြောင်း ပြန်ဆက်ရမယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကျမလဲပေါ့ အဲ့ဒီမှာ အင်မတန် အကျင့်ဆိုး အဓ္ဒိပါယ် မရှိတာတွေ စကြာရတော့တာ ပဲ
ဘယ်ကဆက်လဲ . ဘယ်မှာ ဘယ်လိုနေလဲ . လစာဘယ်လောက်ရလဲ . နိုင်ငံခြားသာနဲ့ လက်ထပ်ထားပါသလား နိုင်ငံခြားသား ခံယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား မေးခွန်းပေါင်း ၁၆၀၀၀ … ကျနော်ဖြေခြင်ပါတယ် ခင်ဗျာတို့ ဟာ စစ်မန်တဲ့ အစိုးရဖြစ်ခဲ့ လျင် ဘာတခုမမေး နေစရာမလို ပါ (အဖြေက .. သက်တန်းကုန်တဲ့ ပါတ်စပို့ ကို မြန်မာ သံရုံးကနေ နိုင်ငံတော်က သက်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးနုန်းနဲ့ လှဲပေးလိုက်ရုံပါပဲ ။) ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ စာအုပ်မရခင်ကတည်းက အမျိုးမျိုးသော အရာတွေပြပြီးပါပြီ သံရုံးက ရဲအလုပ် လုပ်စရာမလိုပါဘူး ။ အခုတော့ စောက်ရေးမပါတဲ့ သံရုံးက တရာဝင် ဒါမြတွေဘဲ ထွီး…
KHIN MG has written7post in this Website..
View all posts by လေပြေ →
နောက်ခါ မေးရင် ပြောလိုက်ဗျာ
မင်းစောက်ပူ ဘာပါလို့လိုက်စစ်နေတာလဲလို့ ..
တော်ကြာ သူကြီးက ဒါဏ်ရိုက်လိမ်မယ်နော် မမှတ်သေးဘူးလား?
အဲဒါပဲဗျို့ ဘယ်နေရာမှ ရှာမတွေ့ နိုင်တဲ တရားမျှတမှု လေ ၊
နေရာ ပုံသဏ္ဍာန် အနေအထား သာကွာသွားတယ် သူတောင်းစားအကျင့်က တူတူပဲ ။
အေးဓါးပြ တွေ ပေါ့နော်
ဆရာသော်တာဆွေ ရဲ့ ဝတ္ထုထဲက လို ဆိုရရင်
“ အေးဓါးပြ တို့ ခွေးကျသွားခြင်း ”
၁၀ နှစ် … အချိန်ပေးကြည့်ရင် ဘယ်လိုလဲ ?
အီးဖြစ်တာမို့..အင်ကနေ.. နက်ပြီး လုပ်လိုက်လို့မရဘူးလား..။
( အီးဂါး = eGov = e-Government
အီး =e= electronic
အင် = Internet
နက် = Net )
နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာတိုင်းနီးပါး မြန်မာသံရုံးကိုစိတ်ပျက်ကြတယ်။အမြင်မကြည်လင်ကြဘူး။ဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့အခွန်ပေးရလို့။သက်တမ်းတိုးခပေးရတာကို သိပ်အပြစ်မမြင်ကြပါဘူး။နိုင်ငံတိုင်းကလူတွေလည်း ပေးရတာကိုး နည်းတာများတာဘဲရှိမယ်။ ဒါတောင်မြန်မာကပေးရတာတော်တော်များသေးတယ်။ သူများတိုင်းပြည်တွေကအခွန်မပေးရဘူး.။မြန်မာကဘာကြောင့်ပေးနေရတာလည်း။ သူများတိုင်းပြည်ကလူတွေပေးရရင် ကိုယ်တွေလည်းပေးချင်မှာပါ။ ဒီအခွန်ပေးရတဲ့စံနစ်ပျောက်သွားရင် ဒီမေးခွန်းတွေလည်းမေးစရာလိုတော့မှာမဟုတ်ဘူး.။ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေလည်းမေးရတဲ့ပါးစပ်ညောင်းသက်သာသွားမယ်။ ဖြေရတဲ့သူတွေလည်းစိတ်တိုစရာမလိုတော့ဘူး။ အခွန်ပေး၇တဲ့စံနစ်ကြီးချုပ်ငြိမ်းပါစေ။